शब्दकोश: पुतली : अनेकौँ आयाम
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, May 15, 2010
भुतुक्क बनायो यो तस्वीरले त.... अरु कुरा तस्वीर जस्तै मोहनी लगाउने खालको छ .. यत्ति भनें ।
Basanta May 15, 2010
अति सुन्दर तस्बीरहरु प्रकृतिका र सुन्दर मानव-प्रकृतिका! र तपाईँका मिठा कुराहरु! यति भएपछि के चाहियो??
Dilip Acharya May 16, 2010
तपाईको पोस्ट पढ्दै गर्दा मलाई पन स्कूल जीवनमा 'झ्यालिन्चा' समातेर उडाएको याद आयो ।
बाँकी तस्बिरहरु सबै प्राकृतिक र 'peculiar' पनि छन।
Bed Nath Pulami ( Umesh) May 16, 2010
पुतलीसडक र बत्तीसपुतलीका ठेगानाहरूमा भौँतारिँदा तिरीमिरी तारा देखिएला, पुतली त खोई !!? ( हाहा ) नाम मात्रको पुतलीसडक होइन र ?
हो नि - बाल्यकालमा पुतली पक्रिएर पुच्छरमा मसिनो धागो बाधेर चङ्गा जस्तो बनाएर उडाउदा खुब खुसिले उफ्रेको पनि !!
राम्रो टासो - जीवन जी !!
अनि पक्कै पनि पुतलीहरू उडिरहून् … … उड्न सकिरहून् । तिनको पखेटा नकाटियोस् कुनै बहानामा कहिल्यै पनि ! (तपाइँ कै शब्दमा भने है !)
Dhruba Panthi May 16, 2010
'पुतलीहरू उडिरहून् … … उड्न सकिरहून् ।
तिनको पखेटा नकाटियोस् कुनै बहानामा ।'
सुन्दर विचार, सुन्दर तस्वीरहरु !!
S May 22, 2010
I used to love these butterfliesalot when I was child...
Just I revived my feelings...this post made me nostalgic...
Growing up is annoying...its kinda getting away from nature...
Different colored wings...red , black, blue...white, pink...various colors reflecting various colors of life...
One thing you forgot to mention that ....butterfly comes out of caterpillar...this makes me feels amazed...How wouldacaterpillar know that it is going to beabutterfly, the most beautiful insects...most Nakali...in our term,.... :)
Nepalean May 22, 2010
पुतलीहरू उडिरहून् … … उड्न सकिरहून् । तिनको पखेटा नकाटियोस् कुनै बहानामा । आकाश अझ फराकिलो बनोस। नेपालीको मन पनि त्यस्तै रहोस।
दीपक जडित May 30, 2010
यो भावना पहिले नै पढे/सुनेजस्तो लाग्यो, सायद बाल्यकालको भोगाई उस्तै उस्तै भएर हो । तस्विरका सबै पुतलीहरुले मन हरे । दोश्रो तस्विरमा भएको पुतलीलाई हामी अलि फोहोरी तरिकाले चिन्थ्यौं र हाँस्थ्यौ बच्चामा र त्यसले नै धेरै सास्ती पाउँथ्यो हामीबाट ।